Ny tranon-jaza vavy - ny habetsaky ny uterus dia ara-dalàna, ny asany, ny aretin'ny uterus amin'ny vehivavy
Ny tranon-jaza vavy dia sampana foibe amin'ny rafitra fananahana. Ny fahaterahana ny fiainam-baovao, ny fampandrosoana sy ny fahanterana ny foetus. Ny tranonjaza, miaraka amin'ireo fanampin-tsoratra, dia mampiavaka ny toeram-pitsaboana hafa sy ny rafitry ny vatana, izay mamaritra ny fahatsaran'ny vatana iray manontolo.
Ahoana no nanaovana ny kôdô?
Ny endriky ny tranon-jaza vavy dia miavaka. Amin'ny fiantombohan'ny vanim-potoan'ny fahamaotiana, ny vatana dia miovaova isaky ny fiovana. Araka ny rafitra tantara, ny taova dia misy karazam-bolo telo:
Ny fara-tampony dia ny vakimparitra. Manarona ny taova avy any ivelany izany, ary manakana azy tsy hikoriana.
Ny fitaratra afovoany dia ny myometrium. Izy io dia aseho amin'ny bibilahin'ny vatana hozatra sy fifandraisana, izay tena elastika. Ity trano ity dia manazava ny mety amin'ny fiterahana amin'ny fiterahana mba hampitombo ny haben'ny habeny mandritra ny vanim-potoan'ny fitondrana. Milaza ny mpahay siansa fa ny fibobohan-drivotra no tena mafy indrindra ao amin'ny vatan'ny vehivavy.
Ny tara anatiny dia endometrial (functional). Miankina be dia be amin'io anjara io ny sarimihetsika ao amin'ny fitondrana vohoka - miditra ao izany ary maniry ao anaty atody ny atody . Raha tsy misy ny fitondrana vohoka, dia manomboka maty ny selan'ny atométrie ary mamela ny lavaka fanenitra miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny ratra.
Aiza ny kibon'ny vehivavy?
Tsara homarihina fa ny taovam-pananahan'ireo vehivavy, ny tranonjaza, indrindra fa, dia manana fahazoana mihetsika. Noho izany, ny làlam-pitombon'ny vatana dia mety hianjera kely ary miankina amin'ny dingana iainan'ny fiainana (ny fiterahana, ny bevohoka). Amin'ny ankapobeny, ny tranon-jaza dia miorina ao anaty lavaka faneno kely, eo anelanelan'ny ratra sy ny banga. Vetivety dia mihozongozona izy, ary eo amin'ny andaniny roa eo amin'ny andaniny dia manohana ny haino aman-jery izay manakana ny organ tsy hilentika, hanomezana ny fahaleovan 'ny taova.
Noho ny fitaovana malemy, ny tovovavy vehivavy dia afaka manova kely ny toerana misy azy. Noho izany, rehefa feno ny ratra, mihodina ny taova, ary rehefa feno ny ratra dia mandrosoa. Ny fiovana lehibe eo amin'ny toerana misy ny tranonjaza dia voamarika rehefa teraka ny foetus. Ny fitomboan'ny embryon dia tsy mitombo ihany koa ny habetsahan'ny taova, fa mahatonga azy io ho lasa lavitra kokoa ny lakolosy kely.
Ahoana ny endriky ny kibo?
Rehefa nodinihina vetivety ny endriky ny tranon-jaza amin'ny vehivavy, dia tokony hojerena fa ny taova dia toa tahaka ny peara niverimberina. Ao amin'ny rafitry ny vatana dia mahazatra ny manome:
Any ambany dia ny ampahany ambony amin'ny taova, mandaitra, miorina eo ambonin'ny tsipika fifangaroana ao amin'ny tranonjaza ny valan-dronono. Ny vatany dia manana endrika mifangaro, ny ampahany amin'ny ankamaroan'ny ampahany amin'ny taova. Ny ampahany ambany amin'ny uterus - ny vozona - dia mizara ho fizarana roa: ny ampahany voviny - dia mipoitra ao amin'ny lava vaginal, ary ny supra-vaginaly - ny ampahany ambony eo ambonin'ny lava vaginal. Eo amin'ny toeran'ny fifindran'ny vatana ao amin'ny tendany dia misy fitakiana, izay antsoina hoe isthmus. Ny tapany ambany dia misy lavaka ao amin'ny lakandrano.
Ny asan'ny mainty dia ny fiterahana. Ity vatana ity dia mifandray mandrakariva amin'ny dingan'ny fanabeazana. Ao anatin'izany dia misy organism kely kely avy amin'ny selan'ny firaisana ara-nofo. Ankoatr'izany dia misy asa maro hafa izay ataon'ilay tovovavy:
Fiarovana. Ny vatana dia sakana amin'ny fiparitahan'ny micro micro-organismes, viriosy avy amin'ny vagina mankany amin'ny appendages.
Ny fanadiovana - isam-bolana, miaraka amin'ny alim-bolana manadio ny lakandrano, ny vagao miaraka amin'ny fikoropahana.
Ny fandraisana anjara amin'ny dingan'ny fanafody - dia ny rohy amin'ny fomba spermatozoa avy amin'ny lava vaginal amin'ny tavoahangy trompetra.
Mandray anjara amin'ny dingana fampidirana.
Manamafy ny fonosana miaraka amin'ny fitaovana misy azy.
Uterus of woman - dimensions
Tsara homarihina fa ny mari-pamantarana toy ny habetsahan'ny vehivavy uterus dia manana mari-pahaizana manokana. Noho izany, mba hampitomboana ny habetsahan'ny vatana, ny dokotera dia afaka manao ny fiheverana voalohany momba ny taova na ny fitondrana vohoka izay efa mipetraka amin'ny dingana voalohan'ny fanadinana, tsy mampiasa fitaovana. Ny habetsahan'ny uterus dia mety miova ary miankina amin'ny antony maromaro:
ny fisian'ny marary sy aretina amin'ny rafitra fananahana;
ny fisian'ny vohoka sy ny fiterahana;
ny taonan'ilay vehivavy.
Ny habetsahatry ny tranonjaza amin'ny vehivavy tsy misy ilana azy
Ny diagnosy ny aretin'ny tranonjaza, ny fametrahana ny haben'ny vatana dia natao amin'ny fampiasana ultrasound. Ity fomba fitsaboana ity dia manampy amin'ny famaritana mazava tsara ny fiovan'ny rafitra ao amin'ny organ, mba hametrahana ny toerana misy ny toerana misy azy. Ny haben'ny tranonjaza dia mahazatra ho an'ny vehivavy tsy manan-janaka, toy izao manaraka izao:
lava - 7-8 cm;
Ny sakan'ny lehibe indrindra dia 5 cm;
lanjany - eo amin'ny 50 g.
Ny haben'ny tranonjaza amin'ny dingana samy hafa amin'ny fitondrana vohoka
Ny fitomboan'ny fiterahana dia dingana lava sy lava, miaraka amin'ny fivoarana sy ny fivoaran'ny foetus. Ampitombo mivantana ny haben'ny zazakely amin'ny ho avy ary miteraka ny fitomboan'ny uterus, ny volany. Amin'io tranga io, ny fanovana ara-drafitra ao amin'ny rindrin'ny organ dia notandremana: tsy ny fihenan'ny kalitao ihany fa ny fihenan-tsakafo ihany koa. Amin'io tranga io dia mitombo ny tranon-jaza mandritra ny vanim-potoanan'ny fitondrana vohoka.
Amin'ny herinandro voalohan'ny fitondran'ny lahy sy vavy, ny taolam-pananahana dia mitazona ny endriny boribory, tsy manova ny habeny, satria mbola kely ny embryon. Na izany aza, tamin'ny volana faharoa dia nahazo endrika endrika ny organ ary ny habetsahan'ny tovovavy nandritra ny fitondrana vohoka dia nitombo imbetsaka tamin'io fotoana io. Mihamitombo ny habetsahan'ny uterus, ary amin'ny faran'ny vanim-potoana fitondrana dia mahatratra hatramin'ny 1 kg izany! Isaky ny mandinika ny vehivavy bevohoka dia mametraka ny haavon'ny tranon'ny tranonjaza ny dokotera. Ny fiovana amin'ity mari-pamantarana ity mandritra ny herinandro vohoka dia voatondro ao amin'ny tabilao etsy ambany.
Dimy ny tranonjaza taorian'ny fiterahana
Aorian'ny fiterahana dia manomboka mihatsara tsikelikely ny tranon-jaza vavy. Mihena ny habeny, mihena ny lanjany. Ity dingana ity dia mitaky 6-8 herinandro. Mandroso haingana ilay dingana. Noho izany, amin'ny fiafaran'ny herinandro voalohany, ny 6-7 andro aorian'ny nahaterahana dia miisa 500-600 g eo ho eo ny tranonjaza, ary efa tamin'ny 10 andro taorian'ny nisehoan'ny zazakely tamin'ny hazavana - 300-400 g. Amin'ny faran'ny herinandro fahatelo, ny vatana dia manjary 200 tanàna
Tsara homarihina fa manana toetra manokana ny fizotry ny fifindrana. Ny fanadihadiana ny habetsahatry ny uterus ho an'ny ultrasound, ny fomba ambarany etsy ambany, ny dokotera dia mamintina fehin-kevitra momba ny famerenana haingana ny rafitra fananahana. Ny famaritana ny tranga amin'ity tranga ity dia miantso:
fampitomboana ny taolam-paty raha misy polyhydramnios ;
vohoka maro ;
Ny lanjan'ny vatan'ny zandriny mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny habetsaky ny uterus amin'ny vanim-potoanan'ny menopause
Ny fihenan'ny taolam-paty - ny vanim-potoan'ny famaranana ny fikorontanan'ny reny, miaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny rafitra ao amin'ny tranonjaza. Ny rafitra hormonina dia mahatonga ny hormonina tsy dia manao firaisana ara-nofo, ka noho izany dia mitsahatra ny mitroka ny endometrio, tsy misy intsony ny sela vaovao. Izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny habeny sy ny halehiben'ny taova. Izany dia nohamafisin'ny ambaratonga kely kokoa amin'ny uterus amin'ny ultrasound.
Noho izany, nandritra ny 5 taona voalohany hatramin'ny nanombohan'ny vanim-potoanan'ny klimakterika, araka ny fanamarihan'ny manam-pahaizana, dia mihena 35% ny habetsahan'ny vehivavy uterus. Ao amin'io tranga io, eo amin'ny 1-2 cm, ny habeny dia mihena ny halavany sy ny sakany. Ny fatiantoka amin'ny haben'ny taova dia mijanona aorian'ny 20-25 taona manomboka amin'ny vanim-potoanan'ny menopause (amin'ny 70-80 taona). Amin'io fotoana io dia manana 3-4 santimetatra ny taova.
Ny aretina amin'ny uterus - lisitra
Mety hitranga amin'ny aretina isan-karazany ny aretina amin'ny uterus amin'ny vehivavy. Na izany aza, araka ny fijerin'ny dokotera, matetika ny rafitra mitarika ho amin'ny fivelarany dia hormonal fiovana ao amin'ny vatana. Izany dia manamafy ny haavon'ny haavon'ny fivoaran'ny rafitry ny fananahana mandritra ny fahaleovan-tena, aorian'ny fiterahana sy mandritra ny taona. Ny paozika indrindra amin'ny tranonjaza dia lozam-pandrefesana sy fitsaboana amin'ny taova. Anisan'ny aretina mahazatra amin'ity vatana ity:
Enti-manentana ny atidoha: metritis, endometritis , adnexitis.
Pathologies amin'ny vozon'ny tranon-jaza: fipoahana , ectopia, dysplasia, homamiadan'ny matavy.
Ny fahasamihafana ara-pahasalamana mifandray amin'ny tranon-jaza: fahantrana amin'ny ectopic , ny fitsaboana amin'ny oviana, ny fanalan-jaza an-tsitrapo.
Ny fizotran'ny tumora: myoma, fibroma.
Fampivoarana ny taolam-patin'ny kôpta
Ny aretina vokatry ny tranonjaza izay mipoitra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana embryononan'ny rafitra fananahana, ny fametrahana ny taova ara-nofo dia nantsoina hoe fiterahana. Anisan'ireo trangan-javatra mahazatra amin'ity karazana ity dia ilaina ny manamarika izao manaraka izao:
Ny tranonjaza avo roa heny - dia miforona vokatry ny tsy famitana ny ampahany amin'ny fantson'ny Müllerian. Amin'ity tranga ity, ny karazana psykolojika manaraka dia miavaka:
Saddle - ny tranga raha vitsy ny faran'ny vatana.
Uterus misy tsisy tsy feno na feno - ny endrika dia tsy miova ivelany, na izany aza, ny afovoan-tarehatra dia miseho ao anaty lavaka, na mizara ampahany na tanteraka izany.
Ny vatana iray misy vozona iombonana dia miorina rehefa milevina ao amin'ny faritra misy azy ny mullerian.
Ny fitrandrahana ny tranonjaza - fa tsy ny vatan'ny uterus ihany no mizara, fa ny vozony ihany koa.
Ny areti-mifindra vokatry ny tranonjaza
Ireo aretina amin'ny viriosy amin'ny tranokala dia karazam-pihetsika mahazatra indrindra amin'io taova io. Mety hipoitra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny fitsipiky ny fahadiovan'ny toetr'andro izy ireo. Matetika, ny fiparitahan'ny mpitsabo mahatsiravina dia mitranga mandritra ny fifandraisana amin'ny lahy sy vavy, noho izany dia mety ho voan'ny aretina kokoa ny vehivavy efa antitra. Ny pathology dia matetika no miaraka amin'ny fiovan'ny mikroflora, noho izany dia misy ny marary fanampiny izay ahafahana mamantatra ny fanitsakitsahana (jihitra, mirehitra ao amin'ny faritry ny perine, hyperemia). Anisan'ny tratry ny aretina indrindra amin'ny vehivavy ny:
ny viriosy papilloma.
Ny aretina oncolojian'ny tranonjaza
Ny aretina vehivavy avy amin'ny tranonjaza, miaraka amin'ny fivontosan'ny tumora, dia miavaka amin'ny aretina rehetra momba ny rafitra fananahana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny antony mahavariana ho an'ny fivoarany dia ny fatran'ny aretin-pihetseham-po sy aretina, aretina hormona. Ny fahasarotan'ny fikarakarana ireo lozisialy ireo dia ny tsy fisian'ny sary miharihary eo amin'ny tosi-drà, malemy, mihodinkodina. Matetika ny tsinay dia voamarina amin'ny fikarohana tsy nahy. Anisan'ireo aretina azo avy amin'ny tumor toy ny tranonjaza, ilaina ny manavaka:
kanseran'ny endometrial ;
Famaranana ny kômonio
Amin'ny taonany, genitia vehivavy, ny tranonkala dia afaka manova ny toerana misy azy. Matetika ny vehivavy zokiolona dia mihena ny tranonjaza vokatry ny fikorontanan'ny tosi-drà sy ny fiovana mifandraika amin'ny taona. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny taova dia nafindra toerana, eo amin'ny fitarihana ny vava. Ny aretina dia miaraka amin'ny soritr'aretina manokana:
ny tsy fahampian-tsakafo;
fanaintainana ao amin'ny kibo ambany;
dronono (tsy fahampian-tsakafo, haavo).
Ny loza ateraky ny fitsaboana dia ny mety hisian'ny fahasarotana amin'ny fihanaky ny tranonjaza ao amin'ny vagina. Izany toe-javatra izany dia mitaky fitsaboana ara-pahasalamana tsy misy fitsaboana, ka rehefa manana ny soritr'aretina voalohany mila dokotera ianao. Ny fitsaboana dia ny famerenana amin'ny laoniny ny fiantohana ny fitrandrahana ny ligamento ao amin'ny gorodona ao anaty lakolosy, mitsambikina ny hozatry ny vagina.
Fanesorana ny tranon-jaza vavy
Ny fanesorana ny taovam-pananahana dia asongadin'ny dokotera ho toy ny aretim-pivalanana. Ity fomba fitsaboana radika ity dia ampiasaina amin'ny aretina izay tsy azo ampiharina amin'ny fitsaboana, ny fisian'izany dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toetry ny vehivavy. Ho porofo ho an'ny hetereterectomy, ny dokotera dia mamaritra ireto fanitsakitsahana manaraka ireto:
Ny tsiranoka miafina mitatra lehibe mihoatra ny 12 herinandro;
fivoarana haingana ny felam-paingotra;
necrosis of myoma nodes;
ahiahiana amin'ny oncologie;
kanseran'ny vatana na ny matoatoa.
Ny vehivavy miomana amin'ny hetsika toy izany dia matetika liana amin'ny fanontaniana hoe inona no mety hitranga aorian'ny fanesorana ny tranonjaza. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mila fitsaboana tsy tapaka ny mari-pahaizana momba ny fanoloana hormone. Amin'ny fikarakarana araka ny tokony ho izy, ny fanarahana ny fepetra sy ny torolalan'ny dokotera, ny voka-dratsy ateraky ny fanesorana ny uterus dia kely.
Aretin-tsolika amin'ny vehivavy - fitsaboana
Tansy ho an'ny fanalan-jaza
Ahoana raha tsy misy taova?
Lire après mastectomy
Miondrika amin'ny lehilahy - inona no tokony ho fantatry ny vehivavy?
Areti-mifindra avy amin'ny virosy
Hemorrhagic cystitis - fitsaboana
Furazolidone ho an'ny cystitis
Volom-bava diso - mifidy izay tsara indrindra ary mianatra ny fomba hampatanjaka azy ireo
Aiza ny vitamin F?
Aiza ny tilikambon'i Pisa?
Dresses Summer avy amin'ny chiffon 2013
Dresses ho an'ny feno - ireo modely modely, tsara tarehy sy mahafinaritra
Fehikibo matevina ambony 2013
Methyluracil suppositories amin'ny gynecology
Haka azy indray aho: 25 mahavariana mahatsiravina, izay mbola adala indray ny tambajotra!
Deadlift - teknika ny famonoana
Ahoana ny fanovana ny anjara?
Akanjo fotsy volo eo amin'ny bal
Hacksaw amin'ny hazo
Ankizivavy ho an'ny ankizivavy